उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनलाई एक युवा व्यवसायीको अनुरोध | चितवन पोष्ट दैनिक
उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनलाई एक युवा व्यवसायीको अनुरोध
२०७० पुष ३०, मंगलवार ०३:४२ गते
राष्ट्रको सञ्चालन, समुन्नति, विकास तथा भविष्य उसको आर्थिक गतिविधिमा निर्भर हुन्छ । अर्थतन्त्र एउटा राष्ट्रको मुटु हो, जसले राष्ट्र तथा जनतालाई सञ्चालन मात्र होइन, जीवित पनि राख्दछ । र, कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र भनेको त्यस राष्ट्रको व्यवसायी र उद्योगीको काँधमा रहेको हुन्छ । अर्थात्, राष्ट्रको सञ्चालन व्यवसाय र उद्योगीमाथि निर्भर छ वा आर्थिक गतिविधिको पर्यायवाची भनेकै राष्ट्रका व्यवसाय र उद्योगीहरु हुन् ।
त्यसैगरी, उद्योग र व्यवसायको संरक्षण, प्रवद्र्धन, स्थायित्व र सेवाको लागि बनेको संगठन भनेकै उद्योग वाणिज्य संघ हो । यस्तै, एउटा उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनमा पनि अवस्थित छ, जो व्यावसायिक हकहितका लागि स्थापना गरिएको हो । अर्थात्, चितवनमा अवस्थित व्यवसायी र उद्योगीहरुको संगठन नै उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन हो ।
अहिले बजार क्षेत्रमा तथा उद्योग वाणिज्य संघ परिसरमा देखा परेको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनावी सरगर्मी बेग्लै छ । महाधिवेशनलगत्तै हुने चुनावमा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरुको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको नेतृत्व लिनका लागि चुनावमा व्यावसायीहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । संगठनको नाममा संगठित हुनु त परै जाओस्, व्यवसायीहरु आफैँआफैँमा तँछाडमछाड गरी संगठनको खिल्ली उडाइरहेका छन् । विभिन्न गुट÷उपगुट, साम्प्रदायिकता, जातीयता र खराब राजनीतिले व्यवसायीको संगठनलाई नकारात्मक छाप छाडेको छ ।
के व्यवसायीहरु संगठित हुनका लागि चुनाव आवश्यक छ ? के व्यवसाय नेतृत्व लिनका लागि चुनाव आवश्यक छ ? के व्यवसाय हकहितका लागि व्यवसायीहरु चुनावमा जान आवश्यक छ ?
जब व्यवसायी–व्यवसायीहरु नै एकअर्काप्रति प्रतिशोधको भावना लिएर प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने के त्यो संगठन मजबुत होला ? संघमा लाग्नुको उद्देश्य के हो भन्ने भाव व्यवसायीहरुले बुझ्नुपर्छ । व्यवसायी हकहितका लागि संघमै गएर सार्थकता पाउने भन्ने होइन होला ! केवल इज्जत र नामका लागि संघमा आउनेहरुले संघलाई धमिराले झैँ खोक्रो बनाउँछन् । हामी व्यवसायीहरुमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । यही सफल नेतृत्व गर्ने व्यावसायिक व्यक्ति, जसले संघको कार्यभार मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यवसाय र उद्योगीहरुको नेतृत्व लिने हैसियत राख्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सर्वसम्मतबाट हामीले चयन गर्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धा भनेको व्यापार र व्यवसायमा आवश्यक छ, संगठनमा होइन ।
नेपालमा जटिल समस्याका बाबजुद नेपाली व्यवसायीहरुले ठूलो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । युवाहरु विदेश पलायत हुनु, १२ घन्टा लोडसेडिङ हुनु, विकासका कामहरु ठप्प हुनु र त्यसमाथि पनि राज्यमा देखिएको राजस्व प्रणालीको जटिलताले व्यवसायीलाई कमजोर पारेको छ । राज्य स्वयं उद्योग, कलकारखाना र निर्यातलाई विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा राजस्वको नाममा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्रसित पारिरहेको छ ।
आर्थिक उन्नतिको प्रचूर सम्भावना भएको चितवन जिल्लालाई सही ढंगले रुपान्तरण नगरिँदा चितवन जिल्लामात्रै होइन, राष्ट्र पनि पछाडि परेको छ । राष्ट्रको केन्द्रविन्दुमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत स्थापना गर्न नसक्दा उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्न सकिने नारायणी नदीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कृषि र खनिजको धनी जिल्लाले मूर्तरुप नपाउँदा युवाहरु विदेशिएका छन् । यसका लागि केवल सरकारी निकाय र सरोकारवाला मात्र नभएर उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
आज उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा चितवनका युवाहरु पलायन भएका छन् । यसको एउटै समाधान भनेको आर्थिक क्रान्ति हो । त्यसैले, दीर्घकालीन समुन्नतिका लागि संगठित हुनु आवश्यक छ । केवल क्षणिक नाम र इज्जतका लागि मात्र नभएर सकारात्मक सोचले व्यवसाय र आर्थिक हितका लागि एकजुट हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको उपज भनेकै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निर्वाचनमार्फत पूर्णता दिनु हो । तर, यो राजनीतिमा मात्र आवश्यक छ । एउटा संगठनलाई निर्वाचनको कुनै खाँचो छैन । नैतिकता, असल चरित्र, दूरगामी सोच, कुशल व्यवस्थापक भएको व्यक्ति उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनलाई अहिले खाँचो छ ।